गुल्मीको बीरबास नजिकै माइक्रोबस दुर्घटना ७ को मृत्यु,११ जना गम्भीर घाइते – HamroSamrachana
गुल्मीको बीरबास नजिकै माइक्रोबस दुर्घटना ७ को मृत्यु,११ जना गम्भीर घाइते
हाम्रो संरचना । १३ कार्तिक २०७४, सोमबार १४:४५
१३ कार्तिक,तम्घास / बुटवलबाट गुल्मीको तम्घास जाँदै गरेको माइक्रोबस गुल्मी-दरबार गाउँपालिका-४ बीरबास नजिकै दुर्घटना भएको छ । माइक्रोबस दुर्घटनामा कम्तिमा ७ जनाको मृत्यु भएको छ, ११ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बुटवलबाट तम्घास जादै गरेको बा ४ ख ५५०१ नम्वरको माइक्रोबस गुल्मी-दरबार गाउँपालिका-४ बीरबास नजिकै रिडी-तम्घास सडक खण्डमा माइक्रो अर्को गाडी लु१च ४५२२ नम्बरको गाडीसँग ठोक्किँदा माइक्रो ४ सय मिटर तल खसेको थियो । सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रकाश सिग्देलका अनुसार अन्य घाइते तथा यात्रुको खोजी जारी राखिएको छ ।
दुर्घटनामा अन्य ५ जना गम्भिर घाइते भएका छन् । बुटबलबाट १३ जना यात्रु बोकेर सो माइक्रो हिडेको बताइएको छ । घटनास्थल अप्ठेरो ठाउमा रहेकाले उद्धार गर्न अर्को बाटो प्रयोग गर्दा केही ढिलो भएको सुरक्षाकर्मीले बताएका छन् । स्थानीयबासी र प्रहरीले अहिलेपनि उद्धार कार्य जारी राखेका छन् । मृतकको सनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
नेपालमा ५ वटा मात्र राजनितिक दल मान्यता प्राप्त ! समानुपातिकको कुन पार्टीको कति मत ? मतगणना अन्तिम चरणमा,